भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह – Sajha Bisaunee
दिपेन्द्र वली । २६ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:१४ मा प्रकाशित
त्यसो त भ्रष्टाचारले विभिन्न कार्यालयका काम, राजनितिक दलका भाषण (अझ भ्रष्टाचार गर्नेहरूकै मुखबाटसमेत)देखि चियागफमा समेत स्थान पाइरहेको छ । यसले किन यसरी स्थान पायो होला ? नेपालमा मात्रै यसले स्थान पाउँछ ? अब कहिलेसम्म यसले यसरी चियागफदेखि उच्च ओहोदा र अड्डासम्म चर्चा पाउँला ? यी र यस्ता विषय रहेनन् भने बहसका विषय के बन्लान् ? के भ्रष्टाचार कर्मचारी, नेता वा सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूले मात्रै गर्छन् ? यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर यो लेख तयार गरिएको छ ।
तपाईं, म वा अर्को कोही व्यक्ति पनि कुनै न कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचारको भुक्तभोगी भइसकेको कुरा साँचो हो । हामीले भ्रष्टाचार भइरहेको शंका गरेको, भ्रष्टाचार भइरहेको देखेको, सुनेको, जानी–नजानी त्यसको हिस्सा बन्नुपरेको अवस्था पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले आम रूपमा यसको अर्थ जो–कोहीलाई थाहा भएकै कुरा हो । यद्यपि भ्रष्टाचारको परिभाषा र दायरा निकै फराकिलो छ । सामान्यतया ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको मिलनबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो । यो शब्दले ‘आचार नभएको’ भन्ने जनाउँदछ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधसित जोडिन्छ । यसर्थ, कुनै पनि काम विधिविपरीत गरिनु भ्रष्टाचार हो । चाहे त्यो आर्थिक हिसाबसँग सम्बन्धित होस् वा अन्य । यतिसम्म कि कतै भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो विषयसँग तपार्इं–हाम्रो लिनु–दिनु केहि छैन र हामी मौन बस्यौँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो ।
कुनै कामको लागि तपाईं–हामी भनसुन गर्छौँ र विधिविपरीत भए पनि आफ्नो काम वा आफूले इच्छाएको काम गराउन दवाव दिइरहन्छौँ । तपार्इं–हाम्रो समाजको चरित्र पनि त्यस्तै बनिसक्यो । जसले विधि मिचेर होस् वा जेसूकै होस् भनसुनकै आधारमा तपाईंको काम फत्ते गरिदिन्छ भने हामी त्यस्तैलाई आफ्नो नेता वा ‘आइडल पर्सन’को रूपमा मान्न तयार हुन्छौँ । र, उसले गरिरहेको विधिविपरीतको कार्यलाई नजरअञ्दाज गर्छौं वा कुनै न कुनै रूपमा त्यसको हिस्सेदार बन्छौं । हाम्रो यी व्यवहारले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सघाउ पु¥याइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
कामको अनुगमन, मूल्याङ्कनको काम सुशासनको लागि अति नै महŒवपूर्ण खम्बा हुन् । काम कस्तो भइरहेको छ ? गुणस्तरीय कामको लागि के–के हुनुपर्छ ? कहाँनेर कमजोरी छ ? अनि डिजाइन वा पूर्वतयारी अनुसारको काम भयो कि भएन ? र कस्तो खालको मूल्याङ्कन गर्ने ? लगायतका विषयमा अनुगमनबाट नै थाह हुन्छ । अनि अनुगमनबाट आएको नतिजा नै मूल्याङ्कनको आधार बन्छ । तर अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली नै पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइन्छ । ‘फलानो दिन, फलानो बार हामी अनुगमनमा आउँदैछौँ है’ भन्ने सूचना जारी हुन्छ । जसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ त्यो मान्छे कमजोरी ढाकछोप गर्नतर्फ लाग्छ र अनुगमनको क्रममा काम क्लियर देखिन्छ । तर कमजोरी त कमजोरी नै हो । पछि मात्र थाह हुन्छ । खासगरी पूर्वाधार विकासतर्फका काममा यस्तो भेटिन्छ । यसैगरी अनुगमनकर्ताहरू नै भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरिरहेका पनि फेला परेका छन् । त्यसकारण सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन हुनेगरी व्यवस्था त गरेको छ । यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुगेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अनुगमन, अनुगमनको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।